कोरोना खोप लगाउने मानिस बाँदर बन्न सक्छ ? रूसमा भाईरल भइरहेको छ् फेक म्यासेज -
उज्यालो प्रतिनिधि October 16, 2020 उज्यालो फोकस TOP STORIES
काठमाण्डौ । सारा विश्व अझै पनि कोरोना खोपको लागि पर्खिरहेको छ । यसैबीच रूसमा अक्सफोर्ड खोपलाई बदनाम गर्न अभियान पनि चलिरहेको छ । नक्कली सन्देशहरू सोशल मिडियामा भाइरल भइरहेका छन्, जसमा यो भनिन्छ कि अक्सफोर्डको खोप लगाउने मानिसहरू बाँदर बन्नेछन ।
फोटोग्राफहरू र भिडियो सन्देशहरू मार्फत यस दावीलाई पुष्टि गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्, र भनिन्छ कि चिम्पान्जी भाइरस यो खोप बनाउन प्रयोग गरिएको थियो। यस नक्कली सन्देशसँग सम्बन्धित समाचारहरू रूसको टिभी कार्यक्रम भेस्टिज न्युजमा पनि देखाइएको छ। यो कार्यक्रम यहाँ धेरै लोकप्रिय छ ।
रसियाको सोशल मिडियामा भाइरल भइरहेका फोटोहरु मध्ये ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बनाएको फोटो पनि फोटोशपमा बनाइएको छ। यस तस्वीरमा उनलाई यती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनिंग स्ट्रिटमा हिड्दै गरेको देखाइएको छ। साथै क्याप्शनमा लेखेका छन, ‘मलाई मेरो बिगफुट खोप मनपर्छ।’
भाइरल भइरहेको अर्को फोटोमा पनि एउटा एस्ट्राजोनका कम्पनीले ल्याब कोट लगाएको चिम्पान्जीलाई देखाएको छ, जसमा एक भ्याक्सिन भएको सिरिन्ज थियो। वास्तवमा, एस्ट्राजोन खोप बनाउन मा अक्सफोर्डको पार्टनर हो।
अमेरिकाको अंकल सैमको तस्विर पनि भाइरल भइरहेको छ, जसमा लेखिएको छ, ‘म तपाईंलाई बाँदरको खोप दिन चाहन्छु।’ बेलायतले यी नक्कली फोटोहरू र सन्देशहरूमा तीब्र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्यो कि रूसी अभियानले केवल ब्रिटेनको कोरोना खोपको छवि र मार्केटिंग बिगार्नु मात्र हो, जसले विश्वव्यापी यसको खोप ‘स्पुतनिक भि’ बेच्न सक्छ। । यसैबीच, एस्ट्राजेनेकाका प्रमुख कार्यकारी पास्कल सोरियटले पनि रसियामा भइरहेको यी सन्देशहरूको भर्त्सना गरेका छन्।
अक्सफोर्ड खोप बारे
रिपोर्टका अनुसार अक्सफोर्ड खोप हाल अन्तिम चरणको परीक्षणमा रहेको छ। बेलायत बाहेक करीव ३० हजार मानिसहरु अमेरिका, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा ट्रायल गर्दै छन । भनिन्छ कि यो अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणको क्रममा अन्य खोपहरूको तुलनामा सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएको छ। यो खोप यस बर्षको अन्त्य सम्म मार्केटमा उपलब्ध हुने विश्वास छ।
रसियाको दोस्रो कोरोना खोप पनि स्वीकृत
रसियाले दावी गरेको छ कि देशको दोस्रो कोरोना भ्याक्सिन ‘एपिवाकोरोना’ पनि प्रारम्भिक चरणको परीक्षणमा राम्रो प्रभावकारिता देखाए पछि स्वीकृत भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले बुधवार देशको दोस्रो कोरोना खोप तयार हुने घोषणा गरे। यो साइबेरियामा आधारित भेक्टर संस्थान द्वारा विकसित गरिएको छ।
यो दाबी गरिएको छ कि यो खोपको दुई डोज कोरोना रोक्नको लागि लिनुपर्‍यो । रसियाका उपप्रधानमन्त्री तात्याना गोलिकोवाले भनेका छन कि अब देशभरबाट ४० हजार मानिस यस खोप परीक्षणको अर्को चरणको लागि छानिनेछ ।
प्लास्टिकको बोतलबाट दुध खुवाउनु बच्चाका लागि हानिकारक :
नेकपामा कर्णाली विवाद : बालुवाटार र खुमलटारको दुई
कोरोना विरुद्धको तेस्रो खोप पनि बनाएको रूसको दाबी
सच्चिएनन् ओली ! एकपछि अर्काे ‘एकलौटी निर्णय’ले नेकपामा
यो हो, प्रधानमन्त्रीले ईश्वर पोखरेलको मन्त्रालय खोस्नुका तीन
कोरोनाका कारण गुमाउन सक्छ श्रवण शक्ति ! नयाँ
मात्रिका यादवले नयाँ पार्टी सदस्यता फारम बाँडेपछि नेकपामा
ओलीको ‘एकलौटी’ निर्णयले नेकपामा फेरि ब्युँतायो विवाद, भारि